Shiinaha Customized Bac-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Bacda dugsiga > Bac garabka
(1) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa bilaash. (2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saarka badeecada dalabka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka. (3) Waanu xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh. (4) Si adag loo xakameeyo tayada wax soo saarka oo aan kuugu soo dhiibo iyadoo la adeegsanayo heerka 100%.
1. Horudhaca alaabada ee boorsada garabka keli ah:
(1) Dharka kore ee boorsada laptop-ka ayaa laga sameeyay 840D nylon Oxford maro. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka inuu ku dhex rido bacda. , Isku-dhafkan wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, wuxuuna leeyahay dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Shandadeena hal-garabka ah waa mid neefsan kara, xirashada u adkeysata, biyuhu diidayaan isla markaana hoos u dhigaya culeyska, waxayna qaadi karaan laptop 15.6-inji ah iyo qalabka durugsan.
(6) Shandadeena garbaha ee hal-garabka ah waa la furi karaa waana la xiri karaa. Naqshaddani waxay ka caawin kartaa dadka isticmaala inay si fudud oo dhakhso leh u helaan alaabada. Waxaan sidoo kale u qaabeynay bac gudaha ah Ipad.
Boorso garabka oo laba jibbaaran
Dhererka 16cmX Width 14cmX Dhererka 34cm
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsada garabka kaliya ah
Jawaab: Haa, haddii tijaabooyinka ay keyd yihiin, laakiin xamuulka aan la bixin, waxaan ku siin karnaa shaybaar lacag la'aan.
Jawaab: (1) Waqtiga dirista Muunadda: Kadib helitaanka amarka muunadda, bixinta saamiga waxay bilaabi doontaa tirinta. Muddada tijaabada ayaa qiyaastii ah 7 maalmood oo shaqo. Gobollo kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan oo rar iyo xilliyo kala duwan oo qaadashada shay-baarka. Shaybaarkayaga caadiga ah ayaa la raraa iyadoo la adeegsanayo UPS. Iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, shirkadda saadka ee aad sheegto ayaa laguu diyaarin karaa gaadiid.
Jawaab: (1) Waan qiimeyn karnaa oo soo qaadan karnaa iyadoo ku saleysan sawirada, sawirada naqshadeynta (sawirada cad iyo sawirada 3D) ee aad bixiso, waxaanna bixin karnaa xalal xirfadeed iyo wax soo saar ballaaran.
Calaamadaha kulul: Bacda garabka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka